Ndinovenga maBloggards | Martech Zone
Mugovera, Nyamavhuvhu 26, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Seti ane pambiru pane yake saiti iyo yakandiyeuchidza kunyora izvi.
Ini ndinoda blogging. Asi ini ndinovenga bloggards. Iri izwi idzva randakanyora kune blogger avo vane husimbe hwekublogi - asi vangoda kungodzokorodza rimwe blog, dzimwe nguva izwi neshoko. Iyo simbe uye yakanyanya kuba kuba kubvira hiti dzinogona kungoita kune yavo peji pane pane iyo yekutanga blogger. Zvino, kana iwe uine chirevo chinopesana kana chinotsigira icho chaunoda kuwedzera kune iyo hurukuro - ndizvo izvo Blogging iri! Ndiyo hurukuro iri mublogosphere.
Zviri nyore kwazvo kuti blogger iedze kuita sevamwe mabloggi, nekuda kwekuti pane zvakawanda zvekuisa zviripo. Ramba! - Seth Godin
Iyo inotevera nhanho yakaderera pane iyo bloggards ndivo vakaunganidzwa. Aya ndiwo masosi anongotsvaira zvemukati uye nekuisa pane yavo saiti. Aya ma scum-suckers anosetsa. Ini ndinofunga hazvisi zvipfupi kubiridzira. Chokwadi - vane chinongedzo kudzokera kune rako peji kwawakatumira, asi ivo vatove vakaita mari pane zvako zvemukati. Ndihwo humbavha, hwakajeka uye hwakareruka.
Kana imi vanhu muchiziva marwiriro atingaite izvi, ndokumbirawo mutaure pane izvi. Ndinoda kuti imire!
update: Copyblogger yaona Bloggard. Uku kwaive kukanganisa mukutumira zvinoenderana neTragraph saiti.
update: Zvinyorwa zvaAjay D'Souza zvakabiwa
Tags: Content MarketingCopyrightcurating zvemukatikuba zvemukatikutora zvinyorwa
Nyore Customer Service
Isingafadzi Clip-hunyanzvi: Fat Vanhu Havatenderwe
Aug 26, 2006 na6: 44 PM
Iwe unofanirwa kugadzirisa ichi chakakodzera nguva nemuenzaniso uchangobva kutaurwa Ndiri kureva kangani kuti pepanhau rinobatwa richikwenya blogger?
Aug 26, 2006 na6: 52 PM
Bloggards, ini ndichafanirwa kurangarira izvo.
Ini ndinobata zvakanyanya nekopiraiti uye zvemukati zvekuba zvinhu mune mabloggi epasirese, ikozvino ndiyo imwe yenzvimbo dzangu dzekutanga dzekutarisa.
Inyika isinganzwisisike zvakadaro. Kumwe kugovana nekudzokororazve kunotarisirwa asi kana mumwe akasawedzera chaiko kwazviri, kazhinji kune kuchema. Mumwe anotarisirwa kuvaka, kwete kungodzokorora.
Kupa, hongu, zvinogara zvichidikanwa.
Ndiwo hake hurongwa hwandiri kuona. Inzwa wakasununguka kusawirirana.
Aug 26, 2006 na7: 07 PM
Jonathan, ndinobvuma 100%!
Aug 27, 2006 na5: 38 PM
Ini handizive kuti zvinoita sei kurwisa bloggards kana spam aggregator.
Aggregators anogona kumiswa kana iwe ukashandisa .htaccess. Nekudaro, izvi zvinofanirwa kuitirwa yega yega aggregator.
bloggards, ndinopokana, nekuda kwekuti vane husimbe vanhu vasina ruremekedzo rwekuba zvemukati zvevamwe! X (
Sep 2, 2006 na11: 34 PM
Oo murume, imwe huru poso 😀
Munguva pfupi yapfuura, ini ndawana saiti yaive yakanyatso kuteedzera zvinyorwa zveProblogger.net izwi neshoko. Zvino pandakadzoka, akange abvisa zvese, achikumbira ruregerero nekushandisa inosanganisa inosanganisa - akabva adzokera kunoteedzera mamwe masayiti zvakare! Scum bastards = (
Zvita 7, 2006 na11: 49 PM
Unoti, "Iri izwi idzva randakanyora…"
Asi, maiwe, kwete!
'Bloggard' chiratidzo cheArthur Cronos, chiri kushandiswa kwemakore mazhinji. Kune iyo * yepakutanga *, iyo * chaiyo *, uye * chete * Adventures yeBloggard, shanyira bloggard.com uye uwane iyo yakatwasuka scoop.
Uye nezve izvi zvirevo zvawataura iwe, sei, zvinofanirwa kunge kuri kuchera kwakaipisisa, kupesana kwakanyanyisa, uye kunyepa kwakashata, pasina kupokana. Asi ndine chokwadi kuti waireva nenzira yakanaka.
Zvita 7, 2006 na11: 55 PM
Ndanga ndichireva nenzira yakanaka, Arthur! Ndiri kufara kwazvo kuti:
1. Izwi harina kuzomboenda rakazara-chiutsi!
2. Iwe wakanaka kwazvo pamusoro pechiratidzo chako!
Kana iwe uri wepamutemo Bloggard, ndinogona kukuvimbisa kuti ini handikuvenge!
PS: Ndingawane kupi vhidhiyo yemumwe munhu ari kutamba iyo Mobius Megatar?
Gumiguru 28, 2007 pa 4:21 AM
Hmmm… mabloggiji ay?
Zvakanaka ipapo blog aggregators inofanirwa kunge iri… (dhiramu roll) bloggators (fireworks, pandemonium, kukurumidza kupera)!
Hmmm, zvinomwe chete zvinyorwa zvebloggator, kwete zvakaipa, kwete zvakaipa, kuwana yekutanga widdit